Nhau - Ungasarudza sei girazi rekucheka girazi?
1. Sarudzo: zvinoenderana nesaizi chaiyo yekucheka bhizinesi pachayo, sarudza iyo inokodzera yako wega, girazi muchina wemhando2621: 50 * 50 ~ 2440 * 2000mm, modhi 3826: 50 * 50 ~ 3660 * 2440mm, muenzaniso3829: 50 * 50 ~ 3660 * 2800mm, Model4228: 50 * 50 ~ 4200 * 2800mm
Kuti utarise hwaro hwegadziriro yefekitori, nekuti inosanganisira yakajairwa michina yekupfeka uye kubvarura uye isina basa capital investa.
2. kucheka kururamisa: zvinoenderana neyako chaiyo inoda kusarudza.
3.kucheka kumhanya: yekumhanyisa kumhanya ndiko kuita kukuru kwemuchina wekucheka, chete mechina uye kudzora chikamu chese kuita nekuenderana kwemamiriro akanaka, wekucheka muchina kuti uwane inoenderana inomhanya, saka zvisinei
chii chaizvo kumhanya kunodiwa? Iko kumhanya kwemuchina wekucheka chiratidzo chakanaka chekuita kwemuchina wekucheka unotarisira.
4. otomatiki typetting optimization basa: iro girazi optimization chisimbiso chakakosha cheyero yegirazi yekucheka mwero, komputa kamwe kugadzirisa bonde hakugone kuwana zvirinani zvibudiriro.Iyo basa rekuti rechipiri bhuku rekugadzirisa mushure mekugadzirisa ichave yekutonga yakakosha chiratidzo chekufambira mberi kweiyo optimization system.
5. chikamu chemuchina: kugadzikana uye kurongeka kwechivimbiso, chekutanga chikamu chemuchina chekugadzira uye kuisirwa rationality chichava chakakosha zvinhu.Kuti uone kugadzikana kwechikamu chemuchina uye kuenzanisa kwetirivhi yekunongedzera kumativi ese maviri. , nzira yekudzivirira deformation uye shanduko mushure mechimiro inogona kugadziriswa chikamu chakakosha chekutarisa michini.
6. basa: mashandiro emuchina wekucheka zvakare chiratidzo chakakosha kuratidza mashandiro emuchina wekucheka.Canogona kugadzirisa kumanikidza, otomatiki kuongorora basa, inogona 360 ° yemahara kufamba, otomatiki kunyora, kunyangwe paine chishandiso muganho basa. zvichingoenda zvakadaro.